यसरी सुरक्षा नीति संशोधन मस्यौदामा सेना हाबी | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यसरी सुरक्षा नीति संशोधन मस्यौदामा सेना हाबी
प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव सेनाको दवाव, सरोकारवालाको आपत्ति
प्रकाशित मिति १ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०८:१२ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । मंगलबार पूर्वरक्षामन्त्री एवं सरोकारवालालाई सिंहदरबारमा ब्रिफिङ गएिको मस्यौदामा वर्तमान सरकारका राजनीतिक नारालाई स्थान दिइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय संशोधन समिति सदस्यमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षासचिव विष्णु लम्साल, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल, पूर्वसांसद एवं राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादव छन् ।
-मस्यौदा अत्यन्त रक्षात्मक भयो । भूपरिवेष्ठित देशका बारेमा सुरक्षा नीतिमा व्याख्या हुनुपर्छ । संसार अहिले एकल धु्रवीय छैन, बहुध्रवीय छ । त्यहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिस्थितिको व्याख्या हुनुपर्छ ।
पूर्वसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य
-प्रस्तावित मस्यौदा अमूर्त भयो । परिस्थितिको व्याख्या कमजोर छ, सही नीति यसरी बन्दैन । सुरक्षा थ्रेटको विश्लेषण कमजोर छ ।
पूर्वसचिव, गोविन्द कुसुम
-विगतमा नागरिकता बाँडेर राष्ट्रघात भयो । ती नागरिकता खारेज हुनुपर्छ । खुला सिमाना नियमत हुनुपर्छ ।
पूर्वसचिव, सूर्यनाथ आचार्य
-अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघका बडापत्रसमेत समावेश हुनुपर्छ । नीति निर्माण तहमा आइएनजीओको भूमिकालाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता, डा. युवराज संग्रौला
-भारतसँग खुला सीमाना हाम्रो सुरक्षामा जोखिम बढेको छ । सीमा व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।
उदारवादी लोकतान्त्रिक मान्यता र मानव सुरक्षाको अवधारणाअनुसार सुरक्षा नीति पुनः परिभाषित गरिनुपर्छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले, सुरक्षा मामिला जानकार
-सबै सरोकारवालाहरूले अपनत्व लिने गरी सुरक्षा नीति जारी गर्नुपर्छ । परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई होइन, आधुनिक सुरक्षा अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । संविधानको भावनाअनुसार हुनुपर्छ ।
डा.खड्ग केसी, सहप्राध्यापक, त्रिवि
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका हुन । हामिले नजसरोकारको विषय भएर साभार गरेका छौ ।
वीपी उद्यानको जग्गामा शहीद पार्क बनाउन लागेकामा कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले वीरगञ्जमा वीपी उद्यानका लागि छुट्याइएको जग्गामा प्रदेश सरकारले शहीद स्मृति पार्क बनाउन लागेकोमा आपत्ति जनाएको…
‘२०१९ मै मेरो पनि स्वयम्बर हुन्छ’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाकी सांसद कोमल वलीले आफ्नो पनि यही सन् २०१९ भित्रै स्वयम्बर हुने खुलासा गरेकी छिन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले आइतबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । अपरान्ह प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ…
गुल्मी । गुल्मीमा अरिङ्गालले टोकेर आइतबार एक जना बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रुरु गाउँपालिका– १ रिडीका…
कसरी बित्छ पोर्नस्टारको जीवन ?
एजेन्सी । सामान्यतः मानिसहरु पोर्नस्टारको जीवन मोजमस्ती र आनन्दमा बित्ने सोच्छन् । के सामान्य मानिसले सोचेको जस्तै हुन्छ त उनीहरुको…